Labsa Ajaja Ol-aanaa Waraana -ABO – Oromedia
Home » Oduu » Labsa Ajaja Ol-aanaa Waraana -ABO
(Oromedia, 2 Waxabajjii 2019) WBO labsa haaraa baase.
Labsi Ajaja Olaanaa Waraana ABO kun akka hubachiisetti, WBOn bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf qabsoo hidhannoo jabeessee itti fufa.
Guutummaan labsichaa akka armaan gadii ti.
“Nuti Miseensonni ABO qaama Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) kan taanee falmaa qabsoo hidhatnoof jecha kaayyoo ummata Oromoof qabannee jirru, Hooganoota ABO Finfinnee jiran wajjin shira diinni xaxeen qunnamtiin keenya cituu irraa kan ka’e hojii guyya guyyaa irratti wal taliguu fi waliif taligamuun waan hanqateef of dandeenyee sochohuuf akka tahutti qaama hoogganaa “AJAJA OL’AANAA WARAANAA ABO” utubannee sanaan geggeeffamuu jalqabuu keenya ibsinee turuun ni yaadatama. Haatahu malee, nuti qabsoo karaa nagaa hin laganne. Hooggana keenyas hin waakkanne. Karaa fi sirni milkeessaan haa hordofamu jechuun qabsoo haqaatti fi yaada Injifataa qabannee jirra.
Ajaja Ol’aanaa Waraana ABO AO
Previous: የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮምያ እያካሄደ ያለዉ የጦር ወንጀል (War Crime) በሁሉም የዓለም ማህበረ-ሰብ ልወገዝ ይገባል!
Next: “Falmaa Oromoo hubachuu dhabuun rakkoo naannichaa daran hammeessa” Ajaja olaanaa waraanaa ABO/WBO